မင်းရဲ့မုန်းတီးမှုကို ဒီတစ်ခါလည်းဒါဟာသင်၏ချစ်သူများကိုချစ်ရဲ့! | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 15, 2015 တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 20, 2015 Douglas Karr
ဂျေးဘိုင်ရာ၏နိဂုံးချုပ်အဆိုမှာလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျေးသည်သူ၏လာမည့်စာအုပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ မင်းကိုမုန်းတီးပါ။ သူ၏တင်ဆက်မှုသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီး၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသုတေသနအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် Tom Webster တိုင်ကြားမှုများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ဗျူဟာကျကျဖြေရှင်းရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့တိုးတက်စေမည့်အကြောင်းသူ၏အဖွဲ့သည်။
ကျွန်တော်သံသယရှိမိပါတယ် အမှန်စင်စစ်၊ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောက၌ကျွန်ုပ်သည်တင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ထိပ်တန်းအမှားအယွင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးမည်သည့်အမှားအယွင်းမှမျှ၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ဂျေးသည်လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုမျှဝေခဲ့ပြီးလူရွှင်တော်အကြားဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆွေးနွေးမှုကိုကျွန်ုပ်ချက်ချင်းသတိရစေခဲ့သည် လူးဝစ် CK နှင့် Conan O'Brien.
ကျွန်တော်ပထမ ဦး ဆုံးပြောနိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ခုကတော့ Apple ပါ။ ငါက Apple ရဲ့ပရိသတ်ကြီးပါ။ ငါဟာ 3AM EST အတွက်သူ့ရဲ့နှိုးဆော်သံကိုပြခဲ့တဲ့ Apple Watches ရဲ့ပထမအစုကို ၀ ယ်ခဲ့တဲ့ nut-case တစ်ခုပါ။ ငါ့လက်ထဲမှာရဖို့ငါမစောင့်နိုင်ဘူး။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖတ်ပါ။ နည်းပညာတွေ၊ ဘလော့ဂါများနဲ့ Apple ကိုမုန်းတီးသူများသည်နာရီကိုမုန်းတီးနေကြသည်။ သူတို့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေလည်းကျွန်တော့်အတွက်အရေးမကြီးဘူး။ ထိုအခါငါကသူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုမဆို Apple ကကိစ္စမရှိသင့်တယ်ထင်ပါတယ် စျေးကြီးလွန်း။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့်မြန်နှုန်းပြissuesနာများသည်မုန်းတီးသူများ၏တိုင်ကြားချက်များဖြစ်သည်။ ဟေးမုန်းတဲ့သူတွေ…တစ်ရက်မှာတစ်သန်းရောင်းခဲ့ကြပြီးအခုဇွန်လကျော်လွန်ပြီးမှာပြန်ရောင်းကြပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Apple Watch ကမုန်းတီးမှုတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။ ဘာလို့သူတို့ကိုဖက်တာလဲ။
DK New Media Fires Haters and ၎င်း၏ချစ်သောသူကိုချစ်၏
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောမနှစ်ကမှပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြissuesနာအတော်များများငါ့အမှားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များမရှိဘဲတိုးချဲ့ပြီးတော့ကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့အလျင်အမြန်ရှာဖွေ။ မှန်ကန်တဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ့်အစား၊ ငါတို့ဆီကအကူအညီတောင်းတဲ့လူတိုင်းနီးပါးကိုခေါ်သွားတယ်။ အဲဒါကအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုတစ်ခု infographic ဒီဇိုင်းပင်တက်အနာ ကျနော်တို့မှတဆင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ဖောက်သည်အမျိုးအစားများ.
ကြမ်းတမ်းပြီးဈေးပေါသောဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်အနေနဲ့မကြည့်ခဲ့ကြဘူး၊ နောက်ဆုံးတစ်ပြားမှမှန်သမျှကိုညှစ်ထုတ်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုမြင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုမဖက်ဘူး၊ သူတို့ကိုပစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ယဉ်ကျေးမှုအရကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်နှင့်၎င်းတို့နှင့်အတူအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ကွာခြားချက်မှာနေ့ရောညပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောနှစ်တစ်နှစ်ရရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာကိုတိုးချဲ့သည်၊ ပျော်ရွှင်သည်၊ ငါတို့လုပ်နေသည့်အလုပ်များသည်အရင်ကထက်များစွာသာလွန်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်းတီးမှုကိုကျေနပ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်။ ဒါဆိုငါတို့မစမ်းတော့ဘူး။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးပြောမိလျှင်၎င်းသည်အများပိုင်ဖြစ်စေ၊ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့ကချိုကိုသော့ခတ်တတ်ကြသော်လည်းများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းလျှောက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သည့်အခါမျှငှားရမ်းခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အိုးများရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်သောစားသုံးသူများအတွက်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုတန်ဖိုးထားသောဖောက်သည်များအားအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
မင်းကိုမုန်းတယ် အလွန်အကျွံအားထုတ်မှု။ ငါချစ်မြတ်နိုးသူတွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ ၎င်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်နှံ့စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖောက်သည်များပိုမိုရှာဖွေခြင်းနှင့်၎င်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာများကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ငါစီးပွားရေး၊ အားကစား၊ နိုင်ငံရေးနှင့်အခြားအောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ကိုကြည့်သောအခါသူတို့၏မုန်းတီးမှုကိုလျစ်လျူရှုပြီးသူတို့၏အောင်မြင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောလူများကိုငါတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအားနည်းချက်များသည်လူတိုင်းကိုနားထောင်၊ လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်နှင့်စျေးကွက်မှချမှတ်ထားသောမဖြစ်နိုင်သည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုဘယ်သောအခါမျှမပြည့်မီသောသူများဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်း၊ ကေဘယ်၊ utilities၊ လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါစားသုံးသူများသည်သူတို့ပေးဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၏တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်၍ တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာကိုမရဘူးဆိုရင်၊ အများပြည်သူမြင်နိုင်ဖို့အတွက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာကဲ့ရဲ့သံတစ်စုံကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီကသူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်သူတို့၏ငွေတောင်းခံလွှာထဲသို့ထပ်မံထပ်မံထည့်ရန်ကြိုးစားပါကစားသုံးသူများအနေဖြင့်လာမည့်အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြေရှင်းနည်းကိုအာမခံထားမည်။
ငါထင်သည်မှာ အကယ်၍ ______ လေကြောင်းလိုင်းများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များကို ပို၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆက်ဆံခဲ့ပါကလေယာဉ်ပျံများကိုသူတို့နောက်သို့ ဦး တည်သည့်နေရာသို့ ဦး တည်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုကိုအသုံးပြုသောအနိမ့်ဆုံးစျေးကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ မုန်းတတ်သူအများစုကလေကြောင်းကုမ္ပဏီကိုတောင်ဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ လေကြောင်းလိုင်းအများစုတွင်သင်ဂရုစိုက်လျှင်ပင်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှထွက်ခွာရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်နေရာချထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးအတန်းအစားအတွက်ငွေပေးချေခြင်း၊ ဇိမ်ခံယာဉ်များ ၀ ယ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ထားသောအာမခံသို့မဟုတ်အာမခံအတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပိုမိုစျေးကြီးသောလက်တော့ပ်အတွက်နွေရာသီဖြစ်ပါကအခြားသူများကြုံတွေ့ရသောပြtheနာများကျွန်ုပ်၌မရှိခဲ့ပါ။ Delta ၏ခရီးသွား ounge ည့်ခန်း - ဥပမာ - အံ့ is စရာကောင်းပြီးသင်ခရီးစဉ်အများစုတွင်အပိုများအတွက်အနည်းငယ် ၀ ယ်နိုင်သည်။ လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူကိုလူတိုင်းစောင့်နေစဉ်ငါသောက်တယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကိုယ်စားလှယ်ကကျွန်တော့်နာမည်ကိုဖြုတ်ချပြီးလမ်းပေါ်လျှောက်သွားတယ်။ အဘယ်သူမျှမဇီဇာကြောင်, မ muss ... ငါနှစ် ဦး စလုံးကတန်ဖိုးထားငါကပေးဆောင်။
အပိုဆုကြေး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်။ ငါကအကောင်းဆုံးတောင်းဆိုမယ့်သူဆိုရင်ငါပေးဆပ်ချင်စိတ်ရှိသင့်တယ်။ အကောင်းဆုံးကိုကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါကကျန်ရှိသောအရာများကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲသင့်သည်။
ငါ့ကိုအမှားမယူနဲ့ ငါမပျော်သောဖောက်သည်တစ် ဦး လှန်လှောကြိုးစားရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုးစားမည်။ ငါအနည်းဆုံးတော့အများကြီးပေးရမယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကိုနှိပ်စက်မယ်ဆိုရင်၊ dat အတွက်အချိန်မရှိခဲ့ပါ! ငါထင်သည်အွန်လိုင်းတွင်မုန်း၏သိသာထင်ရှားသောရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီများ bugger မှပြောသင့်ကြောင်း။
Tags: အက်ဒီဆင်သုတေသနမုန်းတဲ့သူကိုမုန်းလိုက်ပါဂျေးဗာချစ်သောသူကိုချစ်ကြလော့အွန်လိုင်းတိုင်ကြားမှုများအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခံစားချက်Tom Webster
ဧပြီ 15, 2015 မှာ 10: 23 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရာတစ်စုံတစ်ခု။ ငါကြီးမားသောအမှားအယွင်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာလောင်စာအကျပ်အတည်းများအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သော့ချက်ထဲမှာဥပမာတစ်ခုမျှထိုကဲ့သို့သောခဲ့ကြသည်, ထိုစာအုပ်ထဲတွင်ဥပမာတစ်ခုမျှဖြစ်စေ, ထိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါပြောနေတာကတော့အရွယ်အစားနဲ့အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကတသမတ်တည်းမဟုတ်တဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေကြောင့်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အပျက်သဘောမှတ်ချက်များ၊ တိုင်ကြားမှုများ၊ ၁ နှင့်ကြယ်နှစ်ပွင့်သုံးသပ်ချက်များဖြစ်သည်။
တိုင်ကြားစာတိုင်းကိုအချိန်တိုင်း၊ လမ်းကြောင်းတိုင်းတွင်တုံ့ပြန်ရန်အလုပ်များစွာလုပ်သလား။ ဒါပေါ့။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနပြုချက်အရတိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုသင်တုန့်ပြန်သည့်အခါဖောက်သည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အဆိုးမြင်ဝါဒကိုလျစ်လျူရှုသည့်အခါဖောက်သည်များထောက်ခံအားပေးမှုလျော့နည်းလာခြင်းက ပို၍ ကြီးမားကြောင်းပြသသည်။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အပျက်သဘောမှတ်ချက်များနှင့်တိုင်ကြားချက်များကိုလျစ်လျူရှုရန်တတ်နိုင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်။ သို့သော်ထိုကုမ္ပဏီများသည်သာမန်မဟုတ်ပါ။
ထိုအခါငါသည်လည်း Hug Your Haters ၏ဆေးညွှန်းဖောက်သည်အမြဲမှန်ကြောင်းမဟုတျကွောငျးရှင်းလင်းဖို့ချင်တယ်။ ၎င်းသည်မမှန်ပါ၊ သင်၏လုပ်ငန်းကိုထိုနည်းဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာမကျပါ။ ဝယ်သူသည်အမြဲတမ်းကြားရမည့်ဆေးညွှန်းဖြစ်သည်။ အကြီးအကျယ်ခြားနားချက်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်ဆွေးနွေးချက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသို့မရောက်ရှိနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်မှာသင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တိုင်ကြားချက်၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
သတိပြုရန်မှာအရေးကြီးသည်မှာ Offstage Haters သည်ပုဂ္ဂလိကတွင်တိုင်ကြားသူနှင့်အများပြည်သူထံတိုင်ကြားသူ Onstage Haters တို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ သော့ချက်မှာယခင်သည်အဖြေတစ်ခုလိုချင်သည်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုသည်ပရိသတ်ကိုလိုလားသည်။ အဆိုးမြင်သဘောထားသည်ယခုကြည့်ရှုနေသည့်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်အားဖြင့် F-OFF အားစိတ်သောကရောက်နေသောဖောက်သည်ကိုပြောပြလိုလျှင် (အမှန်အတိုင်း) အထူးသဖြင့် Onstage Haters များနှင့်အတူအမှန်တကယ်အန္တရာယ်သည်ဖောက်သည်အားဆုံးရှုံးရခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကြည့်ရှုသင့်ကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏တန်ဖိုးများကိုစဉ်းစားသောအရာကို၌တည်၏။
ဧပြီ 15, 2015 မှာ 10: 48 pm တွင်
ဂျေး - ရှင်းလင်းချက်ပေးရန်အချိန်ယူရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်စာအုပ်အမြောက်အမြားကိုမှာယူပြီးဖြစ်သည်။
ဧပြီ 20, 2015 မှာ 12: 02 pm တွင်
“ ဖောက်သည်ကအမြဲတမ်းအဆင်မပြေဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖောက်သည်ပဲ” ဟုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအမြင်ဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒါကငါ့ကိုနှေးကွေးစေပြီးသင့်လျော်စွာတုန့်ပြန်စေတယ်။ တကယ့်ပြproblemနာကဘာလဲ၊ အဲဒါက“ မုန်းသူကိုဖက်” ဖို့ကျွန်မရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလမ်းပြပေးခဲ့တယ်။
ဧပြီ 20, 2015 မှာ 2: 19 pm တွင်
ငါရိုးရိုးသားသား Curt မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေလူတွေကလူရှုပ်ရုံနဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အပြုအမူကိုခွင့်မလွှတ်သင့်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ သင်ခန့်မှန်းရသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသင်ပိုင်ဆိုင်သည့်အခါပြုရန်ထက် ပို၍ လွယ်ကူသည်။